Buur Merapi: sifooyinka, samaynta iyo qarxinta | Shabakadda Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 04/01/2022 10:00 | Geology
Mount Merapi waa volcano firfircoon oo ku yaal Bartamaha Java, Indonesia, qiyaastii 30 kiiloomitir waqooyiga Yogyakarta, magaaladan waxaa ku nool in ka badan 500.000 oo qof. Waxaa loo qoondeeyey mid ka mid ah foolkaanaha ugu firfircoon adduunka, badi sababtoo ah waxay ku taal aag hoosaadyo. Intaa waxaa dheer, waa tan ugu firfircoon dhammaan foolkaanooyinka Indonesia.
Maqaalkan waxaan kuu sheegi doonaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Mount Merapi, maxay yihiin sifooyinka, qarxinta iyo muhiimada.
2 Sameynta Buur Merapi
3 Buurta Merapi ayaa qaraxday
4 Finan dhawaan
Gunung Merapi, sida looga yaqaan waddankeeda, waxaa loo kala saaraa sidii stratovolcano ama foolkaano isku dhafan oo qaab-dhismeedkiisu ka yimid qulqulka lafaha ee la eryay malaayiin sano. Barnaamijka Waxqabadka Volcanic ee Caalamiga ah ayaa sheegaya in uu ku yaal meel 2.968 mitir ka sarreysa heerka badda, inkastoo Sahanka Juquraafi ee Mareykanka uu sheegay in 2.911 mitir. Cabiraadahani maaha kuwo sax ah, sababtoo ah dhaqdhaqaaqa folkaanaha ee sii socda ayaa beddeli doona iyaga. Hadda wuu ka hooseeyaa qaraxi xoogganaa ee dhacay ka hor 2010.
Erayga "Merapi" macnihiisu waa "Buur naarta." Waxay ku taallaa meel u dhow dhul ay dad badan ku nool yihiin, waxaana xoogga qaraxu uu ka dhigay meel toban sano ah oo foolkaanooyin ah, taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah 16-ka foolkaanaha ee loogu daraasadda badan yahay adduunka. Inkasta oo khatarta ay jirto, Javanese waxay qani ku yihiin khuraafaadka iyo halyeeyada, marka lagu daro, quruxdooda dabiiciga ah ee muuqda ayaa lagu qurxiyaa hoosta dhirta cufan waxayna hoy u tahay noocyo badan oo xayawaan ah.
Sameynta Buur Merapi
Merapi waxay ku taal aagga hoos-u-dhaca halkaas oo saxanka Hindi-Australiyaanku ku quuso ka hooseeya saxanka Sunda (ama baaritaanka). Aagga hoos-u-dhigga waa meel ay saxanaddu ku hoos degto saxan kale, taasoo keenta dhulgariir iyo/ama dhaqdhaqaaq foolkaanooyin ah. Maaddada taarikada samaysa waxa ay magma ka fogaysaa gudaha dhulka, iyaga oo abuuraya cadaadis aad u weyn, kuna qasbaya in uu sare u kaco ilaa uu qolofku dillaaco oo uu sameeyo foolkaanno.
Marka laga eego dhinaca juqraafiga, Merapi waa dadka ugu da'da yar koonfurta Java. Qarxitaankeedu waxa laga yaabaa in uu bilaabmay 400.000 oo sano ka hor tan iyo markaas waxa lagu sifeeyay hab-dhaqankiisa rabshadda leh. Viscous lava iyo walxo adag oo la eryay intii lagu jiray qarax foolkaanooyin ah ayaa lagu soo ururiyay lakabyo, dushana waa engegay, iyaga oo samaynaya qaab dabaqan oo caadi ah. Ka dib muuqaalkiisa, Merapi wuxuu sii waday inuu koro intii lagu jiray Pleistocene ilaa 2,000 oo sano ka hor burburkii dhismaha ugu weyn ayaa dhacay.
Buurta Merapi ayaa qaraxday
Waxay leedahay taariikh dheer oo qarax rabshado wata. Waxaa jiray 68 qarax ilaa 1548-kii, intii uu jirayna waxa la xaqiijiyay 102 qarax oo adduunka ka dhacay. Caadi ahaan waxay la kulmaa qaraxyo waaweyn oo qarxa oo leh qulqulo pyroclastic ah, laakiin wakhti ka dib, waxay noqdaan kuwo aad u qarxa oo waxay sameeyaan qubbad lafa ah, fur qaab wareeg ah.
Caadiyan waxay ku dhacdaa firiiric yar 2-3 sano kasta iyo 10-15 sano kasta oo firiiric ah. Qulqulka Pyroclastic ee ka kooban dambaska, gaaska, dhagxaanta dhagxaanta iyo jajabyada kale ee dhagaxyada ayaa ka khatarsan lafaha, sababtoo ah waxay ku soo degi karaan xawaare ka badan 150 kiiloomitir saacaddii waxayna gaari karaan meelo ballaaran, taasoo keenta burbur wadarta ama qayb ah. Dhibaatada Merapi ayaa ah in ay ku taal mid ka mid ah meelaha dadku ku badan yihiin ee Indonesia, iyada oo in ka badan 24 milyan oo qof ay ku nool yihiin 100 km.
Qaraxyadii ugu halista badnaa waxay dhaceen 1006, 1786, 1822, 1872, 1930, iyo 2010. Qaraxii 1006 aad buu u xoog badnaa oo la rumaysan yahay inuu horseeday dhammaadka Boqortooyada Mataram, inkastoo ay jirto caddayn ku filan oo lagu taageerayo caqiidadan. . . Si kastaba ha ahaatee, 2010 ayaa noqday sannadkii ugu xumaa qarnigan 353-aad, kaas oo saameeyay kumannaan qof, oo baabiyay hektar oo dhir ah, waxaana ku dhintay XNUMX qof.
Munaasabadda ayaa bilaabatay Oktoobar waxayna socotay ilaa Disembar. Waxay soo saartay dhulgariir, qaraxyo qarxa (maaha hal kaliya), qulqulo kulul, dhul goynta foolkaanaha, qulqulka pyroclastic, daruuro dambas folkaano ah oo cufan, iyo xitaa kubbado dab ah oo sababay in qiyaastii 350.000 oo qof ay ka cararaan guryahooda. Ugu dambayntii, waxa ay noqotay mid ka mid ah masiibooyinka dabiiciga ah ee ugu waaweyn ee Indonesia sannadihii u dambeeyay.
Volcano-ga ugu firfircoon Indonesia ayaa mar kale qarxay Isniintii, Agoosto 16, 2021, wabiyada lafaha iyo gaaska ka soo qulqulaya gunta hoose ee buurta jasiiradda Java ee dadku ku badan yahay, oo dhererkeedu dhan yahay 3,5, 2 kiiloomitir (XNUMX mayl).
Guuxa foolkaanada ayaa laga maqlayaa meel dhowr kiilo mitir u jirta Buurta Merapi, dambaska foolkaanaha ee ka dhashay folkaanaha ayaa gaaraya ilaa 600 mitir (ku dhawaad ​​2000 cagood). Danbasku waxa uu qariyay beelihii ka agdhawaa, inkasta oo amarkii hore ee daadgureynta uu wali shaqaynayo meel u dhow boholka, sidaas darteed lama soo sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay.
Maamulaha Xarunta Xakamaynta Musiibada Foolkaanaha iyo Juquraafi ee Yogyakarta, Hanik Humeda, ayaa sheegay in tani ay tahay neeftii ugu waynayd ee ka soo baxda Mount Merapi tan iyo markii ay masuuliyiintu sare u qaadeen heerka khatarta bishii November ee sanadkii hore.
Qubbada koonfur-galbeed waxaa lagu qiyaasaa inay leedahay mug dhan 1,8 milyan kuyuubik mitir (66,9 milyan cubic fuudh) iyo joog dhan 3 mitir (9,8 cagood). Ka dib qayb ahaan way duntay subaxnimadii Isniinta, oo dillaacay qulqulo qulqulaya oo ka imanaya dhinaca koonfur-galbeed ee buurta ugu yaraan laba jeer.
Maalintii, ugu yaraan laba xadi oo kale oo yar oo walxo pyroclastic ah ayaa qarxay, oo ku soo degay qiyaastii 1,5 kiiloomitir (1 mayl) oo ku teedsan jiirada koonfur-galbeed. Buurtan oo dhererkeedu dhan yahay 2.968 mitir (9.737 cagood) waxay ku taal meel u dhow Yogyakarta, oo ah magaalo qadiimi ah oo ay ku nool yihiin boqollaal kun oo qof oo ku nool agagaarka jasiiradda Java. Qarniyo badan, magaaladu waxay ahayd xarunta dhaqanka Javanese iyo fadhiga qoyska boqortooyada.
Heerka Feejignaanta Merapi ayaa ku sii jiraysa heerka labaad ee afarta heer ee khatarta ah tan iyo markii uu bilowday bishii Nofembar ee la soo dhaafay, iyo Xarunta Kahortagga Khatarta Dhulka iyo Volcanic Indonesia ma aysan kor u qaadin inkastoo dhaqdhaqaaqa kordhay.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto Mount Merapi iyo astaamihiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Geology » Buurta Merapi